October | 2012 | Rev.U Min Lwin
ဟေဗြုန်မြေကို အပိုင်စားရတဲ့ ကာလက်ထံမှ ခွန်အားယူစရာ
Posted by ဦးမင်းလွင် on 14/10/2012
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ဆက္ကပ္.	Leaveacomment
ကျမ်းစာထဲတွင် ခါနန်ပြည်ကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့သော သူလျှို (၁၂)ယောက်အကြောင်းကို တွေ့ခဲ့ရပြီး သူတို့ ပြန် လည်ပြော ကြားကြသော အကြောင်းအရာများကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့အထဲတွင် (၁၀) ယောက်က အနှုတ် လက္ခဏာ ဆောင်သော သတင်းများကို ပြန်လည်ပြောပြခဲ့ကြပြီး အခြားသော နှစ်ယောက်မှာမူ အပေါင်းလက္ခဏာ သတင်းစကားများကို ပြန်လည်ပြောပြကြသည်။ ထိုသူနှစ်ယောက်မှာ ယောရှုနှင့် ကာလက်တို့ နှစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ လူ(၁၀)ယောက်မှ ဣသရေလလူမျိုးများကို ခွန်အား တိုက်တွန်းရမည့်အစား စိတ်ပျက်အားလျော့စေမည့် စကားများ ကိုသာ ပြောဆိုခဲ့ပြီး ကြားရသူများကလည်း ဘုရားသခင်၏ ကတိစကားထက် ထိုသူတို့၏ စကားများကိုသာ ယုံကြည်ခဲ့ကြ ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင်ကို ကျောခိုင်းခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်က ခါနန်ပြည်ကို အမွေအဖြစ် ပေးမည်ဖြစ် ကြောင်း ကတိပေးထားခဲ့ပြီး သွား၍ သိမ်းပိုက်ရန်လည်း ပြောကြားထားခဲ့သည်။
ထိုသူတို့၏ မနာခံခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်ကို အားကိုးခိုလှုံမှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ရက် (၄၀) နှင့် ခါနန်ပြည်သို့ ရောက်နိုင်သည့် ခရီးကို နှစ်ပေါင်း (၄၀) သွားရခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်က ဒါဏ်ခတ်တော်မူခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအချိန်က ရှိခဲ့သောသူအများ စုသည် ခါနန်ပြည်ကို ဝင်ခွင့် မရတော့ဘဲ သူတို့၏ သားမြေများကသာ ကာလက် နှင့် ယောရှုတို့နှင့်အတူ ကတိတော်နယ် မြေ ခါနန်ပြည်သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့လေသည်။
ယခင်က ရှိနှင့်ခဲ့သော အာမလက်လူများကိုပင် ယခုလည်း ရင်ဆိုင်ကြရသည်။ သို့သော် ယခုအခါတွင်မူကား ယခင်ကကဲ့ သို့မဟုတ်။ ယောရှု၊ ကာလက်တို့နှင့်အတူ မျိုးဆက်သစ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ရန်သူ အာမလက်များကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ယေရိခေါမြို့ကြီး ခုရက်တိုင်တိုင် ပတ်ခဲ့သည်။ ယေရိခေါမြို့ရိုး ကြီး ပြိုလဲသွားသည်အထိ ယုံကြည်ခြင်းအား ကြီးခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ နောက်ကို လုံးလုံးလိုက်သော ဤမျိုးဆက်ကို ဘုရားသခင်က အောင်မြင်ခြင်း၊ အောင်မြင်ခြင်း ဆက်တိုက် ရရှိခံစားစေခဲ့သည်။ ရန်သူ၏ နယ်မြေအများစုကို သိမ်းပိုက်ကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ဆက်လက်၍ တိုက်ပွဲဝင်စရာ နေရာတွေ ရှိနေသေးသည်။ သူတို့ လူမျိုး (၁၂) နွယ်စလုံး နေစ ရာ၊ စိုက်ပျိုးစရာများအတွက် ဆက်လက်တိုက်ပွဲ ဝင်ရဦးမည်ဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင် ဣသရေလလူမျိုး (၁၂) မျိုးအတွက် ပိုင်ဆိုင်ရာမြေများကို ခွဲခြမ်းပြီး အသီးသီး ခွဲဝေယူခဲ့ကြသည်။ ထိုလုပ် ငန်းစဉ်များအတွက် ယောရှု၏ ဦးဆောင်မှုများဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယခုပြောလိုသည်မှာ ကာလက်နှင့် ပတ်သတ်သော အ ပိုင်းများကို ပြောဆိုတင်ပြလိုပါသည်။ ကာလက်၏ အကြောင်းကို ယောရှု ၁၄း၆-၁၄ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ယောရှု ၁၄း၆-၁၄ ကိုဖတ်ပါ။
အကျွန်ုပ်နှင့်အတူသွားသော ညီအကိုတို့သည် လူများစိတ်ပျက်စရာကို ပြုသော်လည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် ဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရားနောက်တော်သို့ လုံးလုံးလိုက်ပါ၏။ ထိုနေ့ရက်၌ မောရှေက သင်သည် ငါ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား နောက်တော် သို့ လုံးလုံးလိုက်သောကြောင့် အကယ်၍ သင်နင်းပြီးသောမြေသည် အစဉ်အဆက် သင်၏အမွေ၊ သင်၏သား မြေးတို့၏အ မွေ ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟု ကျိန်ဆိုလေ၏။ (ယောရှု ၁၄း၈-၉)
အထက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်သည် ကာလက်အတွက် အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုနှုတ်ခပတ်တော်ကို ရရှိခံစားပြီးချိန်မှ စ၍ ဘုရားသခင်ပေးမည့် နယ်မြေနှင့် ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ကူယဉ်စရာ၊ အိပ်မက် ရှုပါရုံ တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုအရာအတွက် အချိန်မည်မျှ ကြာသည်ဖြစ်စေ ထိုအိပ်မက်မှာ ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း ပျက်ပြယ်သွားခြင်း မရှိခဲ့ပါ။
တမန်တော်ရှင်ပေါလု၏ ရဲရင့်ပြက်သားသော ယူပါရုံ အိပ်မက်မှာ တစ်လောကလုံး ဧ၀ံဂေလိ သတင်းစကား ကြားနာခွင့် ရရှိလာရန်ပင်ဖြစ်သည်။ ညှင်းပန်း နှိပ်စက်မှုများ ရှိနေသည့်တိုင်အောင် သူ၏ အိပ်မက် ရှုပါရုံမှာ ပျောက်ပျက်သွားခြင်း မရှိချေ။
မာတင်လူသာ၏ အိပ်မက်မှာ ယေရှုခရစ်တော်၏ ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်ကို လူတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ဟောပြောခွင့် ရရှိရေးပင်ဖြစ်တော့သည်။ လူတိုင်းသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ခပတ်တော်ကို နားလည်နိုင်အောင် လူတိုင်း ဖတ်ရှု လေ့လာ နိုင်ရေးပင် ဖြစ်တော့သည်။ သူမသေမီမှာပင် သူ၏ နိုင်ငံမှ သန်းနှင့် ချီသော လူများသည် နှုတ်ခပတ် ကျမ်းစာ ကို ဖတ်ရှုနိုင် ခဲ့လေသည်။
အလက်ဇန္ဒြာ ကမ်းဘဲ နှင့်အတူ ဘာတွန် ဒဗလူ စတုန်း၊ ရက်ကွန် ဂျွန်စမစ်တို့၏ ရဲရင့်ပြက်သာသော ရူပါရုံမှာ ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံးတွင် အသင်းတော်နာမည်အမျိုးမျိုး ကွယ်ပျောက်သွားပြီး ခရစ်ယာန်ဟူသော အမည်တစ်ခုသာ တည်ရှိစေရန် ရူပါ ရုံ အိပ်မက်များ ရှိခဲ့သည်။ ထိုအလုပ်ကိုသာ ကျိုးစား ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁။ မိမိ၏ ယူပါရုံအတွက် အသက်သိတ်ကြီးသွားပြီဆိုတာ မရှိပါ။
ယောရှု ၁၄း၁၀-၁၁ ကိုကြည့်လျှင် အသက် ရှယ်ဆယ့်ငါးနှစ်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားထားပြီး ခွန်အားများလည်း ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ လူတို့သည် အသက် ခြောက်ဆယ်ကျော် ခုနှစ်ဆယ်ရောက်လျှင် အားနည်းသွားသည်။ လုပ်နိုင်သည့် စွမ်းရည်များ လျှော့နည်းသွားသည်။ သို့သော်လည်း ကာလက်အတွက် ခွန်အားတွေ ရှိနေဆဲ၊ အိပ်မက်တွေ ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အားရှိနေဆဲဟု ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ကာလက်သည် ၄၅ နှစ်ခန့် ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း သူ၏ ရူပါရုံမှာ အိပ်မက်များမှာ ပျောက်ပျက်မသွားခဲ့ပါ။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအိပ်မက်မှာ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်က ပေးထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဂျော့ဖိုမန်ဆိုသူ လက်ဝှေ့သမားတစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ တစ်ချိန်ကတော့ သူဟာ ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံပါ။ ယခုအခါမှာ သူ ဟာ တရားဟောဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ သိပ်မကြာခင်က သူ့အသက် (၄၂) နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ တခါ ပြန်ပြီး လက်ဝှေ့ထိုးဘို့ ကြိုးဝိုင်းစင်ပေါ်မှာ တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူရဲ့ အမှုတော်လုပ်ငန်း အတွက် ငွေရှာဘို့ ဖြစ်ပါတယ်။ “ကျွန်တော် အခု ချန်ပီယံကို စိန်ခေါ်ပါမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် ငွေလို နေလို့ဖြစ်ပါ တယ်။ ကျွန်တော်ဟာ Recreation centers for young boys ကို တည်ထောင်ဘို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လေးတွေကို လမ်းပေါ်ကနေ ခေါ်ယူဘို့ပါ။ သူတို့တွေ ဒုက္ခမရောက်စေချင်လို့ပါ” ဟု ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
သူစိန်ခေါ်ခဲ့သူမှာ Evander Holyfield ဖြစ်ပြီး ဟဲဗီဝိတ်လက်ဝှေ့ချန်ပီယံ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် အသက် (၂၈) နှစ်ရှိပြီး ၂၁၅ ပေါင် အလေးချိန်ရှိသည်။ ကျစ်လစ်သော ကြွက်သားကြီးများရှိသည်။ George Foreman မှာ အသက် (၄၂) နှစ်ရှိပြီး ကိုယ်အလေးချိန် ၂၅၇ ပေါင်ဖြစ်သည်။ သူ့၏ကြွက်သားများမှာ လူငယ်များကဲ့သို့ မကျစ်လစ်နိုင်တော့ချေ။ George Foreman သည် အပြင်အထန် လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းပြီး ထိုစိန်ခေါ်ပွဲကို ထိုသတ်ရန် ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ လက်ဝှေ့ကို ကျွမ်းကျင် သူများက ထိုပြိုင်ပွဲကို မထိုးသတ်ရန် ဖြောင်းဖျခဲ့သည်။ သို့သော် George Foreman ကို ဖြောင်းဖြနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိချေ။ George Foreman မှာ ၂ ချီ ၃ ချီထက် ပိုမို ထိုးသတ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
သို့သော်လက်တွေ့ ထိုးသတ်ချိန်တွင် George Foreman မှာ ၁၂ ချီတိုင်အောင် ထိုးသတ်ပြီး သူ၏ ခြေထောက်ပေါ်တွင် ခိုင်မြဲစွာ ရပ်တည်နေသည်ကို အံ့သြဘွယ် တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ထိုပြိုင်ပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ပြိုင်ပွဲပြီးသည်အထိ ထိုးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးဘဲလ်တီးချိန်တွင် ပြိုင်ဘက်နှစ်ဦး ပွေ့ဖက်ကာ အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ပရိတ်များကလည်း လက်ခုတ်သြဘာ ပေးခဲ့ကြသည်။ သူသည် ထိုပြိုင်ပွဲတွင် လက်ဝှေ့ထိုးသတ်ကြေးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိခဲ့လေသည်။
သူနှင့် အင်တာဗြူးတစ်ခုတွင် “ကျွန်တော် အဲဒီပြိုင်ပွဲမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ အိပ်မက်ကိုတော့ ကျွန်တော် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။” ဟူ၍ ဖြေကြားသွားပါသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ အတွက် ဘုရားသခင်က အမှန်တကယ်ပေးထားသော ရှုပါရုံများ ရှိနေသည်ဆိုပါက အသက်ကြီးလွန်းပါပြီဟု ဘယ်တော့မှ ပြော၍ မရနိုင်ပါ။ ကာလက်အတွက် ဟေဗြုန်မြေကို သိမ်းယူရန်အတွက် အသက်ကြီးပါပြီ။ ခွန်အားနည်းနေပါပြီဟု ပြော၍ မရနိုင်ကြောင်း သင်ကိုယ်တိုင် ခံစားကြည့်ပါ။
(၂) ကျွန်တော်တို့ထဲမှာ အဲဒီယူပါရုံ ရှိနေရင် ဘုရားသခင်က ဘယ်တော့မှ ဆွဲနှုတ်သွားမည်မဟုတ်ပါ။
ယောရှု ၁၄း၁၁ အရ ကာလက်သည် ခွန်အားများ ရှိနေဆဲဟု ပြောဆိုသည့် ကျမ်းပိုဒ်ကို သင်ကိုယ်တိုင် ခံစားကြည့်ပါ။ ထိုစစ်ပွဲကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် မည်သည့် ပြဿနာမျှ ကာလက်တွင်မရှိပါ။ သင်၏အသက် ၈၅ နှစ်အရွယ်တွင် ထိုသို့ ပြောဆိုနိုင်သည့်အခြေအနေ ရှိပါဦးမည်လား။ ကာလက်၏ ယူပါရုံ အိပ်မက်သည် ဘုရားသခင်ထံ တိုက်ရိုက် ရရှိ ထားခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်က ခွန်အားများနှင့် စွမ်းရည်များကိုပါ တစ်ပါတည်း ပေးထားသည် အသက်ကြီး လာသော်လည်း လျော့ပါးသွားခြင်း၊ ခွန်အားနည်းသွားခြင်းတို့ မရှိခဲ့ချေ။
ယခင် အနှစ်လေးဆယ်က ရှိခဲ့သော အာနက လူကြီးများသည် ထိုနေရာတွင် ရှိမြဲရှိနေသော်လည်းဘဲ ကာလက်၏ စိတ် နှလုံးကို ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ယနေ့ ကျွန်တော်တို့၏ အသကက်တာတွင် အာနကဟူသော လူ့ဘီလူကြီးများက သင်၏ အိပ်မက် ရူပါရုံများကို ဖျက်ဆီးပစ်ရန် ကြိုးစားအားထုပ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် သင်၏ရူပါရုံသည် ဘုရားသခင်ပေးထားသော စစ်မှန်သော အိပ်မက် ရူပါရုံများဖြစ်ပါက သင့်ကို မည်သို့မျှ အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေနိုင်ပါ။ သင့်ကို ဘုရားသခင်က ခွန်အားများနှင့် ရစ်ပတ်ပါလိမ့်မည်။ သင်သည် ဖိလ္လိပိ ၄း၁၃ အားဖြင့် ပြန်လည်ကြွေးကြော်ပါလိမ့်မည်။ “ငါ့ကို ခွန်အားနှင့် ပြည့်စုံစေတော်မူသော ခရစ်တော်အားဖြင့် ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့ကို ငါတတ်စွမ်းနိုင်၏” ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
ကာလက်သည် ဟေဗြန်နယ်ကို သိမ်းပိုက်ရန် ကြိုစားပြင်ဆင်ခွန်အားယူနေသည့်နည်းတူ၊ သင်သည် အစီအစဉ်တစ်ခု၊ လုပ်ငန်း အသစ်တခု လုပ်ဆောင် တော့မည်ဆိုလျှင် ထိုအရာသည် သင့်အတွက် နယ်မြေ အသစ်တစ်ခုပင် ဖြစ်ပေသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် အချိန်မရွေး ကျဆုံးနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် မစုံလင်သောသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ သည် အလုပ်တာဝန် အသစ်များ အတွက် ဆုတောင်းရမည်၊ အစီအစဉ်ချရမည်။ ကျွန်တော်တို့သည် မှားယွင်းကောင်း မှား ယွင်း နိုင်သည်။ သို့သော် ထိုအရာ အတွက် ရင်ဆိုင်လာရမည့် ပြသနာအသီးသီးကို ပြင်ဆင်ထားကြရမည်။ ကာလက်သည် ဟေဗြုန်မြေကို ရယူရန် လွန်ခဲ့သော (၄၅) နှစ်က စိတ်နှလုံးတွင် ရှိခဲ့သော်လည်း ထိုအချိန်က ဖြစ်မလာခဲ့။ ယခုတစ်ဖန် ကြိုးစားရယူရန် ထပ်မံ ခွန်အားမွေး ပြင်ဆင်ရသည်။ သင့်အသက်တာတွင် သင်၏ ယူပါရုံ အိပ်မက် လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ရန် တစ်ခါတည်း အဆင်ပြေ အောင်မြင်ချင်မှ အောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ စိတ်ဓါတ်ကျ အားလျော့ သွားခြင်း မဖြစ်ပါနှင့်။ ဘုရားသခင်က သင့်ကို နောက်တစ်ကြိမ် အတွက် ခွန်အားများဖြင့် ပတ်ရစ်ပါလိမ့်မည်။
(၃) ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယူပါရုံတွေကို အောင်မြင်ရသောအခွင့်ကို ပေးလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံး ပြောချင်တာကတော့ အခန်းငယ် (၁၂) မှာ ယောရှုက ပြောခဲ့တာကို ကြည့်ပါ။
“ဤတောင်ကို ကျွန်ုပ်အားပေး ပါ။ ဤတောင်ပေါ်မှာ အာနက လူရှိကြောင်းကို၎င်း၊ ထို့နေ့၌ ကိုယ်တော်ကြားရပြီ။ သို့ရာတွင် ထာဝရဘုရားသည် အကျွန်ုပ် နှင့်အတူ ရှိတော်မူလျှင် အမိန့်တော်ရှိသည်ျအတိုင်း ထိုသူတို့ကို နှင်ထုပ်ခြင်းငှါ အကျွန်ုပ် တတ်စွမ်းနိုင်ပါသည်ဟု လျှောက်ဆို၏။”
ကျွန်တော်တို့ဟာ လူ့ဘီလူကြီးတွေကို မသတ်နိုင်ပါဘူး။ ဘုရားသခင်ကသာ သတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်ဟာ မောရှည်ကို ဣသရေလ လူတွေကို ကယ်ထုပ်နိုင်အောင် ကူညီခဲ့တယ်။
ဘုရားသခင်ဟာ ဂိဒေါင်ကို လူ (၃၀၀)ထဲနဲ့ ရန်သူ မိဒါန် လူတွေကို တံပိုးမှုတ်ပြီး တိုက်နိုင်အောင် အကူအညီပေးခဲ့တယ်။
ဘုရားသခင်ဟာ ဒါဝိတ်ကလေးနဲ့ အတူပါရှိပြီး ကျောက်ခဲလုံးလေးတွေနဲ့ဘဲဂေါလျက်ကြီးကို အနိုင်ယူပေးလိုက်တယ်။
ဘုရားသခင်ဟာ တမန်တော်များနဲ့ အတူပါရှိပြီး ကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်းကို ရောမအင်ပါယာကြီးတစ်ခုလုံး ပြန့်နှံ့သွားအောင် လုပ်ဆောင် ကူညီပေးလိုက်တယ်။
ကျွန်တော်တို့သည် ယနေ့ ကျွန်တော်တို့တွင် ရှိနေသည့် အိပ်မက် ရူပါရုံများအတွက် ဘုရားသခင်က ကူညီမစမည်ကို သံသယကင်မဲ့စွာ ယုံကြည်ထားပါသည်။ လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်များအတွက် ကျွန်တော်တို့ ကြိုစားအားထုပ်ဘို့ လိုအပ်လာသည့်အခါတိုင်း ကိုယ်တော်က ပြောမည်မှာ “ မင်းတစ်ယောက်ထဲ မသွားစေချင်ပါဘူး။ မင်းနဲ့ အတူငါသွားမယ်။ မင်းရဲ့ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ပေါ်ဘို့ ငါလည်းကူညီမယ်” ပြောပါလိမ့်မည်။
သင်၏ ရူပါရုံများ၊ လုပ်ဆောင်လိုသည့်အရာများ၊ အခက်အခဲများ မည်မျှ ကြီးမားသည်ဖြစ်စေ ဘုရားသခင်ကတော့ သင်ကို ဘယ်သောအခါမျှ ရှုံးစေမည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ အိပ်မက် ရူပါရုံများ အောင်မြင်လာစေရန် ကူညီမစခြင်းဖြင့် အောင်မြင်ခြင်းကို ရယူခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။